कलियुगको समय कति वाँकी छ ? यसो भन्छ शास्त्र
पुस ७, २०७४
धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् ।
हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्वापर युगको अन्त्यपछि शुरु भएको युग नै कलि युग हो । कलि युगको अन्त्यसँगै सारा संसार ध्वंस भई नयाँ संसारको शृजना हुने विश्वास गरिन्छ ।
कलि युग ४ लाख ३२ हजार वर्षको हुने शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्य युग चार चरणमा रहेको थियो जसको आयू १७ लाख २८ हजार वर्षको रहेको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै त्रेता युग २ चरणमा रहेको थियो । जसकोआयु १२ लाख ९६ हजार वर्ष रहेको बताइएको छ । तेस्रो युग द्वापर युगका २ चरण रहे जसमा ८ लाख ६४ हजार बर्ष रहेको धार्मिक विश्वास रहेको छ । तर, शास्त्रहरुमा यष्ुगहरुको सयम र वर्षबारे फरक फरक व्याख्या गरिएको छ ।
१२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ । कलियुग चौथो युग हो । शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास लिइन्छ ।
कलि युगमा भगवान विष्णुको दशौं अवतारको रुपमा कल्किको प्रभाव रहेको विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कल्कि अवतारको कथा यस प्रकार छ
कल्किको रुपमा विष्णु कलियुगको अन्तिममा उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर धर्म ग्रन्थहरुमा भनिएको छ। कल्कि अवतार कलियुग र सत्ययुगको संधिकालमा हुनेछ।
यो अवतार ६४ औं कला युक्त हुनेछ। कल्कि पुराणको अनुसार, विष्णुको अवतार कल्किले देवदत्त नाम गरिएको घोडामा चढेर संसारबाट पापिहरुको विनाश गर्नुहुन्छ र धर्मको पुन स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कलियुगको अन्त्य हुन्छ र फेरी सत्य युगको प्रारम्भ हुन्छ ।
पुस ७, २०७४ मा प्रकाशित
यी चार राशिका मानिसहरुमा हुन्छ अचम्मको क्षमता
जान्नुहोस् कुन राशि भएकासँग विवाह गर्दा हुन्छ राम्रो, कुनसँग नराम्रो
मरेका मानिस सपनीमा आउँछन् ? यस्तो हुनसक्छ कारण
शनिवार भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, शनिको दशा लाग्नेछ
कुन आँखा फर्फराउनु शुभ, कुन अशुभ ?
समुन्द्र शास्त्र भन्छ : यी अंगमा कोठी भए पैसा टिक्दैन
प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइका लागि संसदीय समितिको बैठक बस्दै काठमाडौं— सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरुको सुनुवाइ आज हुँदैछ । बिहान ११ बजे बस्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा राजदूतमा सिफारिस पाँच मध्ये दुई जनाको सुनुवाइ हुन लागे...
अस्पताल विघटनको निर्णय सच्चाउन जिपी कोइराला फाउण्डेशन माग
पर्वतमा बस दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
पाँच लाखसहित १५ जुवाडेलाई पक्राउ
कङ्गो : साम्प्रदायीक दङ्गामा आठ सय ९० जना मारिए
बच्चा हेर्न पाँच दिन तलबी बिदा
विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीति – आवश्यक छ नयाँ बहस
- डा. युवराज संग्रौला पूरा पढ्नुहोस